Izao ny Hoavy ny Asa? - News Fitsipika
Izao ny Hoavy ny Asa?
Aostraliana siansa milaza CSIRO fahafahana misafidy toeram-piasana ho nomerika mifantoka bebe kokoa sy automated. Iza no te-ho 'aterineto miaraka ianareo'?
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Moa izany ny hoavin'ny asa? Ny mpahay siansa milaza mialoha izay asa dia mbola hisokatra ny olona tamin'ny 2035” dia nosoratan'i Paul Karp, fa theguardian.com ny Zoma 26 Febroary 2016 05.41 UTC
Mpiasa mitady asa ao 2035 Mety hihevitra toy ny lavitra retraining-maso fiara mpandraharaha na amin'ny aterineto chaperones.
Ireo roa avy amin'ny asa ny soso-kevitra avy amin'ny ny tatitra avy amin'ny CSIRO fa ny tabilao 20-taona fironana in nomerika mifantoka kokoa sy automated Australian toeram-piasana.
Related: Automatique dia mety midika ho asa lahatsoratra-fiaraha-monina, nefa tsy tokony hatahotra
Ny asa fanompoam-pivavahana, Michaelia Cash, Namoaka ny tatitra ny zoma tao amin'ny Australian Computer Fikambanana fihaonambe.
Cash hoy ny tatitra dia nampiseho "ny sasany dia tsy maintsy ho asa mandeha ho azy nandritra ny taona maro ho avy, fa fiovana teknolojia ho fanatsarana ny hafa ary koa mamorona asa vaovao sy ny fahafahana".
"Ny hoavy dia tsy ho ny olona mifaninana amin'ny milina, dia ho ny olona mampiasa milina sy ny manao asa izay mahaliana kokoa sy fanatanterahana,"Hoy izy.
Ny tatitra mamaritra enina Mega-fironana amin'ny mpiasa, ny manan-danja indrindra izay dia "fipoahana in fitaovana fifandraisana, angona boky sy ny computing haingana, miaraka amin'ny fandrosoana haingana ao amin'ny rafitra mandeha ho azy sy ny solon-tsaina dia midika fa afaka manatanteraka alalan'ny milina azo baikoina fitaovana maro asa haingana kokoa, soa aman-tsara ary mahomby kokoa noho ny olona ".
Nitombo automatique hanangana ny be pitsiny ny mpiasa asa. "Maro ny ambany-mahay asa ireo dia offshored na automated. Ny vokany dia ny mety ny iray fahaiza-manao sy ny fampianarana nanangana toeram ho an'ny fidirana ho asa matihanina maro sy ny asa,"Hoy ny tatitra.
Ny asa farany eto An-tany: sary an-tsaina ny tena mandeha ho azy izao tontolo izao - Video
Ny tatitra hita siansa, teknolojia, injeniera ary matematika (SAMPA) fahalalana no ampiasaina ao amin'ny 75% ny haingana indrindra-maniry asa ary nitaraina hoe: "maneho ny tanora Aostraliana lavo liana sy fampisehoana eo amin'ny lafin'ny".
Fironana iray hafa dia mialoha ny fotoana fiakaran'ny tena asa sy ny freelancing vokatry ny mpiara-to-mpiara sehatra Upwork, Kaggle, Innoventive ary Freelancer.com, izay ny tatitra filazana "manome danja amin'ny alalan'ny tsy hanahirana, ambany sakana amin'ny fidirana, ary nitombo haingana manome fahafahana ny olona mba hanova ny fotoana malalaka ho karama asa ".
Hoy ilay tatitra raha freelancing "tsy mbola nahazo tany Aostralia, dia lehibe (ary mitombo) asa modely ao amin'ny firenen-kafa ", toy ny tany Amerika izay mpiasa iray amin'ny telo no mahaleo tena mpiantoka.
Related: Elon Musk: Tesla fiara dia afaka miampita Etazonia tsy misy mpamily roa taona
Raha ny tsara indrindra tsy misy asa, Mety hila ny mpiasa mamorona azy, ny tatitra soso-kevitra. "Fandraisana fepetra fahaizana dia azo inoana fa ho bebe kokoa ny zava-dehibe fandraharahana madinika sy ny mpiasa mpanorina lehibe ao anatin'ny fikambanana,"Dia nanao hoe:.
Ny tatitra fanompoana mialoha orinasa, indrindra fa ny fanabeazana sy ny fahasalamana, dia foana ny fiara asa famoronana, izay midika hoe "fifandraisana ara-tsosialy sy ara-pihetsehampo fahaiza-manao ny faharanitan-tsaina dia lasa miha manan-danja".
Hoy ny tatitra ny mpiasa Aostralia dia ho hafa, amin'ny iray amin'ny dimy Aostralianina ny taona 65 amin'ny 2035, vehivavy avo fandraisana anjara sy malalaka ho ohatry ny mpifindra monina miasa taona.
Ny tatitra hoy ny asa fironana dia hiteraka asa vaovao karazana, ary naminavina ireo mety ahitana "lehibe angon-drakitra lehibe mpandalina", fanapahan-kevitra sarotra fanohanana mpandalina, mitokana-maso fiara mpandraharaha, traikefa mpanjifa ny manam-pahaizana, fisorohana manokana ara-pahasalamana sy ny mpanampy an-tserasera chaperones.
"Ny Mitsangàna ny Firenena Mikambana dia manome crewed fiara fiakaran'ny ho mpiasa vaovao ny mpanamory, mpamily sy ny sambo kapiteny izay manao ny asa tsy avy tany an-danitra, ranomasina na ny ahy toerana, fa avy amin'ny birao ao amin'ny toerana lavitra,"Hoy ny tatitra.
Related: Inona no dikan'ny hoe ho olombelona tao an-taona ny teknolojia?
Ao amin'ny kabary ny mpiasa vokatra fihaonambe tamin'ny 8 Desambra, Australian Filan-kevitry ny sendika mpitan-tsoratra Dave Oliver nampitandrina "fiovana tafahoatra aseho amin'ny alalan'ny teknolojia amin'izao fotoana izao no vokatry ny fandrosoana ao amin'ny lalindalina kokoa, midadasika kokoa sy maharitra kokoa hollowing avy tao amin'ny tsenan'ny asa ".
Hoy izy vao haingana ny tatitra CEDA nampiseho 5 tapitrisa asa (40% ny Australian mpiasa) hiatrika ny ambony mety ny ho nosoloina solosaina ny manaraka 10 ny 15 taona.
"Na dia teo aza ny soa maro be ny teknolojia vaovao, isika mafy te-tsy ny tsary ny asa tsena sehatra izay manery ny mpiasa mba asaovy manohitra samy hafa ny fonosam ny asa amin'ny karazana herisetra, hanova eBay fomba lavanty,"Hoy Oliver.
Related: Ny olo-mahery ny solon-tsaina: Afaka manam-pahaizana io hiaro izany amin'ny maso?
"Ny zava-tsarotra ho antsika rehetra - sendika, mpampiasa, dalàna sy ny fitondram-panjakana - dia ny hitrandrahana ny teknolojia fahafahana sy hahatonga azy ireo hiasa ho an'ny, fa tsy manohitra, mpiasa ny hahasoa,"Hoy izy.
Cash hoe "mihoatra noho ny hatramin'izay, ny fanabeazana sy ny fanofanana dia zava-dehibe ho mahomby eo amin'ny tsenan'ny asa. By 2019, ny isan'ny asa azo manam-pahaizana asa dia kasaina ho mihoatra noho ny avo roa heny ny isan'ny misy amin'ny 1991.
"Ahoana no Aostralia saran mpiasa mandritra ny fotoana maharitra dia miankina amin'ny ny fahafahantsika manampy ny mpiasa hanao fiovana ny vaovao sy tsara kokoa asa. Ny fanamby lehibe indrindra dia ny hahazoana antoka tsy misy tavela,"Hoy izy.
28765	4 Article, Fahaizana artifisialy (AI), Aostralia vaovao, Australian politika, Business (Aostralia), CSIRO, tsenan'ny asa, Michaelia Cash, News, Paul Karp, Robots, Teknolojia, Work & Careers
← Microsoft tena toetrany Book Review A Cooler Fomba hanombanana atidoha Fandidiana marary →